रसिद लिएर गएको अवस्थामा यदि आफु ठगिएमा वैदेशिक रोजगार विभागसमक्ष उजुरी गरेर लागत खर्च उठाउन सकिनेछ । यस्ता ठगीबाट बच्नका लागि व्यवसायीले रसिद दिनुभन्दा पनि कामदार आफैले माग्नु पर्दछ ।के तपार्इं वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने आपूmले म्यानपावर कम्पनी वा एजेण्टलाई बुझाएको पैसाको रसिद...
के तपाईं व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै हुनुहुन्छ ? यदि विदेशमा नजिकका आफन्त छन् भने मात्रै व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्छ । एजेण्ट तथा दलालको भरमा व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा अप्ठ्यारोमा पर्न सकिन्छ । सरकारले पनि आफु नजिकका नातागोता जस्तै, बाबुआमा, छोराछोरी, दिदीबहि...
वैदेशिक रोजगारीमा हिडेका कामदारलाई अध्यागमनवाट सहजरूपमा जान पाउनु पर्ने, अध्यागमले विनाकारण फर्काएका कामदारको हवाई टिकट र खाना खर्चजस्ता कुराहरु सरकारले वेहोर्नु पर्ने, भिसा ल्याउँदा रोजगारदाता कम्पनीलाई तिर्नु पर्ने रकम कानूनी रूपवाट पठाउन पाउनू पर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । अस...
वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कागजात हो राहदानी । राहदानीविना कुनै पनि कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउँदैन । यदि कुनै पनि कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहन्छ भने उसले पहिलो काम नै राहदानी बनाउने गर्नुपर्छ । हस्तलिखित राहदानीबाट गैरकानूनी क्रियाकलाप बढ्दै गएपछि सरकारले १ वर्ष अघिदेखि म...
वैदेशिक रोजगारीको २ देखि ३ वर्षको अवधिमा कति कमाउँछु भन्ने जानकारी लिनु उपयुक्त हुन्छ । हाल नेपाली कामदारहरु पनि धेरै पैसा तिरेर जाँदा राम्रो काम तथा कमाइ हुन्छ भन्ने सोचाइबाट ग्रसित छन् ।वैदेशिक रोजगारीमा जानूपूर्व आफुले पाउने तलबका बारेमा राम्रोसँग जानकारी लिनु पर्दछ । वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि...
करारनामामा न्यूनतम तलबमा ८ घण्टाको समयलाई समावेश गरिएको छ वा ओभरटाइमलाई पनि छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । करारनामामा न्यूनतम काम गर्ने समय र ओभरटाइमलाई छुट्टाछुट्टै बुँदामा समावेश गरिएको हुन्छ । यदि तपाईं वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै हुनुहुन्छ भने जानुपूर्व आफूले काम गर्ने कम्पनीबारे राम्ररी जानकारी लि...
गन्तव्य मुलुकको हावापानी र अन्य जानकारी
दिउँसो गर्मी र कामले थाकेको शरीरलाई आराम दिन कामदारहरु राति न्यूनतापक्रममा एअर कण्डिशन लगाएर सुत्छन् । शरीरमा तापक्रमको सन्तुलन मिल्न नसक्दा कतिपय कामदारको सुतेको अवस्थामै मृत्यु हुने गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व गन्तव्य मुलुक र कार्यस्थलको हावापानीका बारेमा जानकारी लिनुपर्दछ । सम्बन्...
वैदेशिक रोजगारीमा जानपूर्व
ट्राफिक ज्ञाननेपालमा लेफ्ट ह्याण्ड ड्राइभिङको चलन छ । तर, नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने अधिकांश देशमा राइट ह्याण्ड ड्राइभिङको चलन रहेको तामाङ बताउँछन् । सही तरीकाबाट बाटो काट्न नजानेकै कारण कामदारहरु सडक दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन् । नेपालका सडकमा जथाभावी बाटो काट्ने चलन छ । तर, विदेशमा स...
विदेशमा अलपत्र परेमा दूतावासको सम्पर्क
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारहरू गन्तव्य मुलुकमा अलपत्र पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । नक्कली भिसामा गएका कारण काम नपाएर अलपत्र पर्नु, तोकिएभन्दा अलग प्रकृतिको काममा लगाएका कारण काम छोडेर अलपत्र पर्नु, काम गर्न नसकेर अलपत्र पर्नुका अलवा रोजगारदाताले यातना दिएकाले काम त्याग गर्दा अलपत्र पर्ने घट्ना...
वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व यौनशिक्षा
यौनशिक्षा मानवजीवनका लागि अत्यावश्यक मानिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा होस् या स्वदेशमा बस्दा यसका बारेमा पर्याप्त जानकारी राख्नुपर्छ । असुरक्षित यौन सम्पर्कबाट शरीरमा घातक रोग लाग्न सक्ने भएकाले आप्रवासी कामदारहरूले यसका बारेमा विशेष जानकारी राख्नुपर्छ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा यौनाचारका बा...